Afrika Atsimo: Horakoraka taorian’ny fandavana ny visa ho an’ny dalaï-lama · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Jolay 2018 7:53 GMT
Nandà tsy hanome visa ny dalaï-lama mba hanatrehany fivoriana ho an'ny fandriampahalemana tokony hiseho tao Afrika Atsimo ny fanjakana afrikana tatsimo. Niteraka horakoraka manerana ny aterineto ilay fanapahankevitry ny fanjakana, tao amin'ny Twitter ka hatrany amin'ny Facebook sy ireo blaogy (amin'ny teny anglisy avokoa ireo rohy rehetra).
Ny toerana nipetrahan'ny fanjakana dia ny hoe
Hampivily ny sain'ny fiarahamonina erantany tsy ho amin'ny fandraisan'i Afrika Atsimo ny Fiadiana izay ho Tompondakan'ny Baolina Kitra Maneran-tany ny fisian'ny dalaï-lama amin'ity fivoriana ity, ary etsy ankilany kosa dia hanintona izany ho any amin'ny fifandraisana tsilotsiloana eo amin'ny dalaï-lama sy i Shina, iray amin'ireo mpiaramiombon'antoka ara-barotra sarobidy indrindra ho an'ny firenena. Nanambara i Thabo Masebe, mpitondra tenin'ny fanjakana, fa «tsy ho tombontsoa ho an'i Afrika Atsimo ny fisian'ilay mpitondra tibetàna.»
Mahatsikaiky fa ankehitriny dia mampitodika ireo jirobe ho any amin'ny zavatra tena niriantsika hosorohana mihitsy ity fandàvana ny visa ity. Manome valiny mihoatra ny 2.000, fidirana aman-jatony eo amin'ny Twitter, ary fanokafana vondrona Facebook maro mba hanoherana azy ny fikarohana ity fanambarana nolazaina tetsy ambony ity.
Ireto misy hevitra vitsivitsy tao amin'ny tontolon'ny blaogy:
Manoratra i Margie:
Henatra tanteraka ity fomba kanosa sy voavidim-bola ity. Mba hahazoana vokatra kelikely fanampiny, noritintsika daholo izay mba sisa tavela tamin'ny fahazoana mitoky ara-moraly amin'ny firenentsika. Araka ireo fisehony, noraisina mba tsy hialàn'ny maso amin'ny amboara 2010 an'ny FIFA ity fepetra ity fa tsy noho i Tibet. Ny vokany, dia ho afa-baraka manerana ny sain'izao tontolo izao isika ho toy ny firenena tsy azo atokisana indrindra amin'ny lafiny zon'olombelona. Ny azoko atao sisa dia ny mino fa hiova hevitra ireo manampahefana mora miova hevitra, na iza izy na iza.
Manoratra ny blaogy Nigeria Best Forum :
I Afrika Atsimo no mpiaramiombon'antoka ara-barotra sarobidy indrindra amin'i Shina ao Afrika, miaraka amin'ny fifanakalozana tamin'ny 2008 izay nahatratra hatramin'ny 100 miliara rands (7.81 miliara euro).
Nanamafy tamin'ny Sapa [masoivohom-baovao] i Dai Bing, mpisolotena ny masoivohompirenena Shinoa ao Pretoria fa efa nampitandrina ny fanjakana afrikana tatsimo i Pekin hoe hisy fiantraikany ratsy amin'ny fifandraisan'ny tany roa tonta ny famelàna ny dalaï-lama hiditra ao amin'ny firenena.
Mihevitra i Tony Mcgregor fa «tokony tsy noraharahian'ny fanjakana afrikana tatsimo fotsiny ireo Shinoa, izay, tsy azo atao ny mamita-tena, tsy noho ny hatsaram-panahy ho anampiany amin'ny fampandrosoana an'i Afrika…» :
Tsy niteraka zavatra toy izao ihany ve ny tsy fanomezana visa ny dalaï-lama? Tena mahatalanjona ny havendranana tanteraka tamin'ny tsy famelana ny dalaï-lama hiditra ao amin'ny firenena, izay efa imbetska no nahazoany fahafahana maro handehanana tao, ary efa ho heloka bevava mihitsy raha ampifandraisina amin'ny olana mikasika ny zon'olombelona izay tafiditra amin'izany.
Tena namadika ny fandresena ho faharesena mihitsy ny ANC tao anatin'ity raharaha ity. Raha mba tsy noraharahiana fotsiny mantsy ireo Shinoa, izay, aza mamita-tena, tsy manampy an'i Afrika mba handroso noho ny hatsaram-panahy fotsiny, fa noho ny kajikajy ara-toekarena mangatsiaka sy voasaina tsara, tonga sy nandeha tsy niteraka onja be loatra ny dalaï-lama, ary haingana dia mety nahafehy tena mba hiala amin'ny krizina hasorenana ny fanjakana shinoa mba hiverenana amin'ny raharahana fitsentsefany an'i Afrika.
Manasongadina ny fifandraisana eo amin'ny ANC, ilay «rafitrasa Zuma» sy ny Antoko kaominista shinoa i Marung :
Amin'ny taha ambany indrindra, tombanana eo amin'ny 500 tapitrisa rands eo ny rakitra azon'ny ANC amin'ny fifidianana, izay hamela azy hividy ny rehetra ao anatin'ny ezaka mafy ataony mba hahafahany mijanona eo amin'ny fitondrana sy hisorohany ny hitondrana ny filohany hiatrika fitsarana.
Ny fanohanana mampiahiahy isan-karazany no zavatra iombonan'ireo mamatsy vola ny rafitrasa Zuma. Tsy iza fa ny Antoko kaominista Shinoa no iray amin'ireo mpamatsy vola ireo miaraka amin'ny zavabitany mahatsiravina momba ny resaka zon'olombelona.
Lazaina fa noho ny baiko avy amin'ny fanjakana shinoa no nandàvana ny visa-n'ny Ilay Masina dalaï-lama tsy hanatrehany ny fivoriana mikasika ny fandriampahalemana tao Afrika Atsimo.
Mazava be loatra fa fanontaniana maro mikasika ny firenena no handaisan'ireo mpamatsy vola ireo fanapahana.
Manoratra i Simon Halliday:
Mety hanampina ny fitenena angamba izany, hampiseho ny fisolelahan'i Afrika Atsimo manoloana ny tombontsoa shinoa, ary mampiroborobo ny politika mpanohitra ny liberaly tsy mifanaraka amin'ny lalàm-panorenana afrikana tatsimo.
Ampitahain'i Llewmina amina fifanarahana nifanaovana tamin'ny devoly ny toerana misy ny fanjakana :
Hitovy foana ny lohahevitra na ho tsoahina any amin'ny tantara, any amin'ny efitrano fijerena sarimihetsika na any amin'ny bokin-tsary aza : ny fanaovana fifanekena amin'ny devoly, fanakalozana zavatra heverin'ny tena ho tsy misy dikany mba hahazoana tombony ara-materialy namboamboarina. Tsy mitàna ny fampanantenany i Satàna, na amin'ny endrika inona na amin'ny endrika inona (ary aza adinoina fa ny anarany dia «legiona, satria maro izahay», Marka 5:9) – porofon'ny maha ratsy azy izay tsy azo ovaina, ary hanandevo azy mandrakariva izany – ary tonga saina ilay fanahy natokana ho an'ny fahaverezana mandrakizay fa namadika ny harena sarobidiny indrindra izy (lahy na vavy).
Izay indrindra no tena nataon'ny ANC tamin'ny fandàvana ny visa an'ny dalaï-lama tsy handehanany ao Afrika Atsimo.
Asongadin'i Tracy Stokes ny fomba tsy mendrika hoe nandritra ny Andro afrikana tatsimo natokana ho an'ny zon'olombelona no nandraisana ilay fanapahankevitra, toa an’ i Ismail Dhorat tao amin'ny blaoginy.
Tsy vita ny nahita na dia lahatsoratra iray fotsiny aza manohana ity fanapahankevitra ity. Hatramin'ny nanambaràna ilay fepetra, nandrahona ny hanao ankivy ilay fivoriana ireo hafa nahazo ny loka Nobel.